Shanghai Tops-group dia mpanamboatra milina famonosana auger. Manana fahaiza-manao famokarana tsara izahay ary koa teknolojia mandroso an'ny mpameno vovoka auger. Manana patanty fisehoana servo auger izahay.
Ny milina fanoratana tavoahangy dia mitandrina ara-toekarena, mahaleo tena ary mora ampiasaina. milina fanoratana tavoahangy mandeha ho azy dia miaraka amin'ny efijery mikasika ny fampianarana sy fandaharana mandeha ho azy. Ny microchip namboarina dia mitahiry ny sehatr'asa samihafa, ary haingana sy mora ny fiovam-po.
TP-TGXG-200 Machine tavoahangy tavoahangy mandeha ho azy dia ampiasaina hanaparitahana satroka tavoahangy ho azy. Izy io dia ampiharina betsaka amin'ny sakafo, fanafody, indostria simika sns. Tsy misy fetrany ny endrika, ny fitaovana, ny haben'ny tavoahangy mahazatra ary ny satroka visy. Ny karazana capping mitohy dia mahatonga an'i TP-TGXG-200 hifanaraka amin'ny hafainganam-pandehan'ny tsipika fanangonana.
Ny milina famenoana vovoka dia afaka manao asa fanoratana sy famenoana. Noho ny famolavolana matihanina manokana, noho izany dia mety amin'ny fitaovana misy rano na ranoka ambany izy io, toy ny vovo-kafe, lafarinina varimbazaha, tsiranoka, zava-pisotro mahery, zava-mahadomelina veterinary, dextrose, pharmaceutique, additive vovoka, poids talcum, pestiside fambolena, dyestuff, sy ny sisa.